Global Voices teny Malagasy » Pôrto Rikô : Miroborobo Ny Tetikasa Tsy Miankina Firaisankina Ara-Ekolojika · Global Voices teny Malagasy » Print
Voadika ny 08 Jona 2013 13:07 GMT 1	 · Mpanoratra Yarisa Colon Nandika (en) i Natalie Southwick, Nancy
Sokajy: Amerika Latina, Karaiba, Pôrtô Rikô (Etazonia), Fahasalamàna, Fanabeazana, Hafanàm-po nomerika, Mediam-bahoaka, Sakafo
Angonin'ny Organización Boricuá de Agricultura Eco-orgánica  (Fikambanan'ny mpamboly ara-pomba eko-biolojika Portôrikana) [es] ireo mpamboly sy ireo olona samihafa te-hianatra hamboly amin'ny fomba maharitra. Mikarakara ekipa miasa, fifanakalozana masomboly ary nametra ny taratsy voalohany ho fanamarinana ny vokatra ekolojika Portôrikana ry zareo. Zarain'ny tranonkalan'izy ireo maimaim-poana ny boky sy lahatsary (resadresaka) izay manadihady ny tena asan'ireo tantsaha Pôrtorikana mpamboly. Ity misy lahatsary nalefan'i Bartus Allen izay andrenesanao an'i Edgardo Alvarado, mpikambana mpamorona ny Boricúa :
Desde mi huerto  (Avy eny an-tanimboliko) [es] dia fandraisana andraikitra goavana nataonà fianakaviana! Mpivady mampihatra ny fambolena ekolojika ary manolo-tena hampianatra ny olona ny fomba mahomby hamoronana tanimboly ampiasàna zezika voajanahary (biolojika) eo an-tokotany i Raúl sy Yvonne. Amboleny eo akaikin'ny trano fiompian'izy ireo, any akaikin'i Bosque Carite “ireo karazana legioma, zava-maniry fanao fanafody, ireo zavamaniry manome hanitra, ary voankazo ho ampiasainao, hamidy sy hohanina”. Hita ao amin'ny tranonkalan-dry zareo ny zavatra ilaina rehetra momba ny masomboly voajanahary (biolojika), ny fikarakarana tanimboly ary na ny lisitry ny tany amidy aza.
Mikarakara tsena ankalamanjàna eo amin'ny kianjan'i Roosevelt de Hato Rey, Pôrtô Rikô ny Cooperativa Orgánica Madre Tierra  [Fikambanana Kaoperativa Biolojika Tany Reny] [es] isaky ny Alahady voalohany sy fahatelo amin'ny volana. Mamory ireo mpiompy, mpanao mofo, mpanotra, mpampianatra ary ireo mpankafy sakafo voa-janahary sy natoraly, ankoatry ny zavatra hafa, io tsena io, mba hifampizara ny fahalalana sy ny otrikaren'izy ireo. Nolazain'ny mpikaroka Carmelo Ruiz  fa io fikambanana izay noforoninà ekipanà mpiasa an-tsitrapo io no iray amin'ireo fikambanana mafy orina indrindra amin'ilay hetsika.
Efa hatramin'ny 2004 no nanànan'i Carmelo Ruiz ny bilaogy atao hoe Proyecto Bioseguridad de Puerto Rico  (Tetikasa fiarovana aina amin'ny fomba biolojika any Portô Rikô) [es] izay hilazany ireo vaovao rehetra mikasika ny voka-dratsin'ny sakafo nasiam-panovàna tamin'ny alàlan'ny siansa (OGM/AGM), ho fanampin'ny famoahany boky  sarobidy sy lahatsoratra momba ny haraton'aina any Karaiba sy Amerika Latina. Manambara ireo vaovao mahafaly momba ny fametahana anarana amin'ireo karazam-bokatra ireo,  sy ny fahombiazan'ireo vondrona miasa mba hahabetsaka kokoa ny fahazoana ireo sakafo ara-pahasalamana ihany koa izy.
La Chiwihna  no tranombarotra voalohany mampihatra ny fifanakalozana tsy mitanila any Río Piedras, Portô Rikô. Lazain'i Karla sy Joel, mpivady nanangana ilay habaka fihaonana io fa sarotra ny mahita teny entina milaza izay rehetra afaka atolotr'io toeram-pifaneraserana malalaka io. Ambaranay mialoha aminareo izay mihevitra hitsidika io toeram-pangalana aina an-tanàn-dehibe io fa manome vokatra voajanahary (bio) avy ao an-toerana sy iraisam-pirenena, sakafo nokarakaraina ary nifanampian'ireo mpahandro mahay mandray anjara ao izy ireo, ary manomana karazana hetsika ara-kolontsaina marobe ihany koa.
Z arain'i Chef Verónica Rodríguez Ojeda  ny fitiavany mahandro, ny haikanto sy ny hafanam-po nandritra ireo kilay manokana nampianarany nahandro, ireo atrikasa itambarambe sy ireo lahatsoratra maro.  Mpiara-nanorina ny ASIQUESI , toeram-pisakafoanana voajanahary kely iray sy ny Slow Food Calalú  any Pôrtô Rikô ity manam-pahaizana ity, nahazo diplaoma avy amin'ny Natural Gourmet Institute for Health and Culinary Arts (Fianarana ho an'ny Fomba Fahandro Sakafo Voajanahary sy Ara-pahasalamana). Nanofana azy tamin'ny asany ny traikefa nananany tamin'ny maha-Chef mpanampy azy tao amin'ny Omega Institute, izay nahitany ” ilay toeram-pandrahoana sakafo avy amin'ny zava-maniry irery ihany tsara sy lehibe indrindra ao Etazonia”. Ankehitriny, tafaverina indray any amin'ny nosy izy izao, ary dia ho avy miaraka aminà hevi-baovao sy mahaliana.
Fandraharahàna ara-ekolojia miandraikitra fitsinjarana ny sakafo novolena avy tamin'ny masomboly voajanahary ny El Departamento de la Comida (Departemantan'ny sakafo) [es]. Manao tolotra ho an'ny tsena, ny lanonana, ary hetsika toy ny Global March Against Monsanto (Diaben'izao Tontolo Izao Hanoherana ny Monsato) izay natao tamin'ny 25 May ihany koa izy. Mba hahafantarana misimisy kokoa ny tantaran'i Tara Rodríguez Besosa izay namorona ity tetikasa ity niaraka tamin'i Olga Casellas dia jereo ny Tedex San Juan : “Ny sakafo ny tambajotra sosialiko”
Tetikasa tantanan'i Wanda I. Rodríguez ary manohana ny fampandrosoana maharitra ny Centro para la Recuperación de Artículos para su Uso, Reuso y Reciclaje (ReusArte)  (Toerana Fanangonana ireo Zavatra ho ampiasaina, averina Ampiasaina ary Ahodina indray) [es]. Saika isaky ny faran'ny herinandro dia manokatra ny varavarany i Wanda mba hikarakarany tsena, resadresaka sy atrikasa ; ary dia tonga mivory miaraka ao ny avy amin'ny lafy valon'ny nosy mba hitady fomba maro samihafa azo amerenana mampiasa indray na manodina ireo akanjo, ny plastika ary ireo zavatra hafa sarobidy. Mamatsy hery ny mpanao asa tànana, ny mpahay tantara, ny poeta ary ireo namana izay tonga mba hizara ny zava-mahaliana azy ity toeram-piombonana malalaka ahatazanan-davitra ny tendrombohitr'i Guayama ity.
La Casa-Tienda Tierra de la Luna  (Ny trano fivarotan'ny Tanin'ny Volana)[es] dia mifantoka amin'ny fanasitranana sy ny fandriampahalemana ; ary mametraka ho laharana voalohany ny vokatra vitan'ireo mpanao asa-tànana ao an-toerana sy iraisam-pirenena ” izay mizara ny kolontsainy, ny fomba amam-panao, ny fitiavana ary ny fanajàny ny Tany Renintsika.” Ampiasain'izy ireo ihany koa ilay toerana malalaka ao Caguas mba hikarakarany ny atrikasa momba ny ekolojia, ny resaka ara-panahy ary ny fahasalamana. Nandritra ny hetsika farany teo izao dia niresaka momba hevitra raketin'ny randrana,  ny fahendren'ny vehivavy ary ny fadim-bolana ireo mpandray anjara.
Zarain'i Maria Benedetti, mpandinika ny zava-maniry sady mpampianatra, tao anatin'ny atrikasany sy ny bokiny, ny zavatra fahalalàny midadasika momba ny zava-maniry fanao fanafody sy ny fitsaboana nenti-paharazana Pôrtô Rikàna. Isan'ireo sangan'asa navoakany ny ¡Hasta los baños te curan! sy ny Sembrando y sanando en Puerto Rico: Tradiciones y visiones para un futuro verde sy Bendiciones botánicas para Boriquén. Tsindrio eto  raha hihaino ny resadresaka niarahana taminy tao amin'ny fandaharan'ny radio “Piedra, Papel y Tijera” (Vato, Taratasy, Hety) alefan'ny fampielezampeon'ny Anjerimanontolon'i Portô Rikô.
URL to article: https://mg.globalvoices.org/2013/06/08/48956/
 Organización Boricuá de Agricultura Eco-orgánica: http://www.organizacionboricua.org/
 boky : http://www.organizacionboricua.org/p/enlaces.html
 fametahana anarana amin'ireo karazam-bokatra ireo,: http://bioseguridad.blogspot.com/2013/05/consumers-union-hails-historic-vermont.html
 lahatsoratra maro.: http://entrecazuelas.yolasite.com/publicaciones.php
 lanonana, : http://eldepartamentodelacomida.com/Bailable-22-mayo
 eto : http://www.piedrapapelytijera.org/2012/07/04/botanica/
 Mi Puerto Rico Verde : http://www.miprv.com/